NOOCYO KALA DUWAN OO SHAAH AH OO AH SHINBIRAHA KERIO: SHARAX, SAWIR, QAABABKA BEERASHADA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Rosa Kerio: talooyinka sharaxaadda iyo daryeelka
Inta badan, marka qofku rabo in uu bixiyo ubaxyo oo aanu ogayn waxa uu doortay inuu jecel yahay, waxay had iyo jeer kugula talinayaan inaad soo iibsato. Xaqiiqdii, runtii, marar dhif ah ayaad la kulantaa qof aan jeclaan lahayn ubaxyo cajiib ah. Laakiin ka dib, oo dhan, dhufanayalka ee dhoobo si dhaqso ah u engegi doonaa, laakiin haddii aad dhirta iyo koraan Rose, waxay ku farxi doonaan adiga iyo dadka aad jeceshahay sanado badan. Mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan ee laga beerto waa kiriimka shaaha ee Kerio, sharaxaad ka mid ah waxaad ka heli kartaa maqaalkan.
Rosa Kerio - noocyo kala duwan oo ah shubanka shaaha ah. Waxaa loo qaaday Lex +, shirkad kor u qaadeysa oo hoos timaada magaca diiwaangelinta Lexoirek. Shirkadda ayaa caan ku noqotay duni caan ah oo ay ka mid yihiin noocyada beeraha, oo aanay ahayn wax la yaab leh, maadaama siyaasadda shirkaddu mar walba loola jeedo inay ku qanciso macaamiisheeda oo dhan noocyada ugu fiican.
Xilligan la joogo, Lex + waa abaalmarin badan oo abaalmarin caalami ah. Rose Kerio - mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee shirkadda. Waxay aad u qiimeeyeen bannaanka u hareeraysan adduunka oo dhan muuqaalka quruxda badan iyo guryaha quruxda badan.
Qeexitaan iyo sawiro kala duwan
Kala duwanaantan ayaa leh dhir badan oo aad u horumarsan, oo leh tiro yar oo sarreen ah, 1.20 m sare iyo ilaa 60 cm ballaaran. Caleenta waa mid dhalaalaya, cagaar mugdi ah. Mararka qaarkood caleemuhu waxay noqdaan burgundy fudud.
Ubax wuxuu leeyahay qaab qaab u ah galaas, isagoo gaaraaya dhexdhexaad ah 13-15 cm dhexdhexaad ah. Tufaaxu waa dhalaal huruud ah, waxaa jiri kara ilaa 35 ka mid ah hal buduun. Marka boogta gebi ahaanba la kala diro, badhkeedu waa mid aan la arki karin.
Dhamaan fasaxyada diirimaad ee kuleylka ah, wuxuu leeyahay mid aad u iftiimaya oo aan fiicnayn. Burooyinka ayaa qaabkooda si fiican u ilaaliyaan sababtoo ah xaqiiqda ah inay si tartiib ah u barbar dhigayaan. Iska yaree ubaxyada ayaa weli ah kuwo cusub oo ugu yaraan 10 maalmood ah. Kala duwanaansho-nimadkan sidoo kale waa mid u adkaysata qabow iyo cuduro kala duwan.
Ma taqaanaa? Qofka muddo dheer soo boodaa udgooni-aadanku, wuxuu hagaajiyaa niyadda wuxuuna dejiyaa nidaamka dareenka.
Inta badan waxay kuxirantahay goobta degelka ku habboon. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa shuruudo siin doono dhirta wax kasta oo lagama maarmaanka u ah koritaanka wanaagsan iyo ubax. Khabiiradu waxay ku talinayaan inay doortaan meel aan lahayn dabayl xoog badan, laakiin qorraxda ku filan. Foostada shaaha ee dhididka ayaa doorbidaya tabaruce, carrada qoyan oo dhexdhexaad ah. Jawaabta acid-saldhig ee carrada waa inay noqdaan 5.6-7.3 pH.
Beeridii haboon ee shaaha unug baa kacday
Aan eegno tiknoolajiyadda saxda ah ee lagu beerto shaah bir ah oo ku kacaya Kerio, oo ay ku jiraan xulashada geedo iyo qaabab beerto.
Ma taqaanaa? Ugu yaraa ayaa kor u kacay meeraha oo aan ka badnayn hadhuudh bariis ah. Kala duwan yaryar waxaa loo yaqaan Sy.
Xulashada iyo diyaarinta geedo
Marka iibsan geedo dooro si taxadar leh. Nidaamka xididka waa in la xiro, qaybta anteenada si fiican loo horumariyo. By habka, iibsashada qalabka beerto ayaa lagu talinayaa in la sameeyo dhammaadka March ama April.
Waa muhiim! Geedo tayo wanaagsan leh ayaa lagu kala soocaa qoorta asaliga ah, nidaam xidid badan oo heer sare ah iyo qaybta kor ku xusan oo aan lahayn goobo qallalan.
Ka hor intaan la beeri, geedo waa in lagu dhajiyaa biyo, qiyaastii 4-6 saacadood. Tani waxay xaqiijineysaa in dhirta ay sii korodho.
Qoyaanka iyo qaabka dhulka
Waqtiga ugu wanaagsan ee laga beerto wuxuu noqon doonaa bilowga Maajo, marka ciidda horeyba loo diiriyo. Qoto dheer oo ah godadka beeraha waa inay ahaadaan 45-55 cm, iyo masaafada u dhaxeysa - 40 cm. Hubso in xididdada geedka ay si xor ah u degen yihiin.
Waa muhiim! Ka hor inta beerto, kaydi geedo meel qabow.
Carrabku waa inuu si wanaagsan u biyoodaa oo buuxiyaa nafaqada ciidda nafaqo leh, taas oo ay ku jiri karto digada, ciidda, peat, iyo lakabka bacaadka ee carrada. Isku darkaani waxaa laga iibsan karaa dukaanka khaaska ah ama kuwa ka soo jeeda dhalashada. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la sameeyo dheecaan ciid iyo quraarad ah, maadaama ay joojinayso biyaha ay dhaawici karaan geedka. Iyadoo lagu beero ciidda, qoorta xididka waa in aan lagu aasin qoto dheer. Ka dib markii laga beerto, Rose waa in si fiican loo waraabiyo iyo hareeraha muddo laba toddobaad ah. Ujeeddooyinkani waxay ku haboonaadaan balka.
Daryeelka habboon ee kala duwan
Daryeelka dhirta oo haboon ayaa ah qodob muhiim ah oo loogu talagalay inay sii kordhiso soo galootiga caafimaad leh.
Doorashada noocyo kala duwan oo kuduuf ah si aad u sameysid beerta kacsan, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa Double Delight, Graham Thomas, Chopin, Sophia Loren, New Dawn, Abraham Derby, Mary Rose, William Shakespeare, Maydka Blue, Maskaxda casaan, Falstaff, Pierre de Ronsard.
Ka waraabinta iyo daryeelka carrada
Qoyaanka dheeraadka ah ee qaboobaha waa wax burburin, sidaas darteed waa in la waraabiyo wax ka badan 3 jeer toddobaadkii. Sidoo kale ogsoonow in baadiyaha waa in la waraabiyo xagaaga iyo dayrta hore. Xilliyada haray ee qoyaanku waa inay ku filaadaan xooraha koritaanka wanaagsan.
Waa muhiim! Ha ilaawin inaad tixgeliso cimiladaada iyo cimiladaada.
Haddii, tusaale ahaan, ay dhawaan ku da'dey goobtaada, ka dibna waraabinta looma baahna. Oo haddaanay roob jirin, waagii hore iyo dhulku engegay, markaas waa in kor loo sii qaado tirada biyuhu.
Biyaha waxaad ku waraabinaysaa sidoo kale. Waa suurtagal in la isla markiiba waraabiyo dhirta biyaha laga soo qaado tuubo ama ceel, waa lagama maarmaan in la joogteeyo ilaa hal maalin kadibna biyo. Heerkulka biyaha waa inuu noqdaa qiyaastii 16 ° C. Dhul biyo ah waa in si toos ah loogu diraa dhulka, oo maaha duurka laftiisa iyo ubaxa. Xilliga xagaaga, xajmiga waraabinta waxaa lagu talinayaa in la yareeyo si loo diyaariyo dhirta xilliga jiilaalka.
Iyadoo aan quudin dheeraad ah, shaaha this hybrid ma kori doono sida loo baahan yahay iyo Bloom si joogto ah. Taasi waa sababta ay muhiim ugu tahay bacriminta dalka. Ujeedooyinkan, Bacriminta macdanta leh ama digada.
Guga, ka hor beerto, khubaro ku talinaynaa bacarimiso ciidda leh Bacriminta nitrogen. Oo ka hor inta ubaxyada dhowr toddobaad, bacriminta fosfate potassium ayaa lagu dari karaa ciidda.
Haddii aad go'aansato inaad isticmaasho digada sida bacrimin, ka dibna hoose waa talooyinka loogu talagalay isticmaalka habboon:
Samee jeexjeexyada gaarka ah ee bacriminta fogaan ah 30 cm geedka.
Dili bacriminta biyo iyo meel jeexjeexyada.
Ka dib markaa, buuxi bacriminta mar kale biyo dabool oo dhulka ku dabool.
Maalin ka dib waxaad u baahan tahay inaad dabacdo dhulka.
Had iyo jeer waxay dhacdaa in biobilku uu u kaco si fiican oo aan quudin dheeraad ah, laakiin midna ma aha 100% hubaal tan iyo waxa ka fiicnaan doonta in la abuuro shuruudo dheeraad ah ee warshadda. Inkasta oo dhirta ay leedahay caabbinta barafka wanaagsan, waxay u fiicantahay in lagu daboolo jiilaalka, tanina waxaad isticmaali kartaa filim ama peat.
Cayayaanka iyo xakameynta cudurka
Rose Kerio, sida noocyo kale oo shub ah, inta badan waa dhibane ah dulinada kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, khatarta ugu weyn ee ay ku leedahay iyada waa aphid. Ka hortagga dagaalka ka dhanka ah cayayaanka isticmaal daawooyinka kiimikada, farsamada iyo daaweynta dadka. Mid kasta oo ka mid ah waa u wanaagsan yahay si u gaar ah, waxaad isku dayi kartaa siyaabo dhowr ah oo dooro midka ugu waxtarka badan:
Habka farsamada ugu fiican ee wax looga qabanayo aphids waa biyo joogto ah oo joogto ah. Si kastaba ha noqotee, gawaarida awoodda leh waxay dhaawici karaan geedka laftiisa.
In arsenal ee hababka dadweynaha doorasho dheeraad ah. Tusaale ahaan, isticmaalka faleebo noocan oo kale ahi waxay noqonaysaa mid faaiido leh: miisaanka baradhada barafka iyo 5 g oo saabuun lagu dhaqo ku shub 5 litir oo biyo ah oo karkaraya kuna sii daa laba maalmood.
Faleebo qajaar ah: kudhi 100 g oo toon ah iyo ku shub 6 litir oo biyo qabow. Ku adkee saddex saacadood.
Isticmaalka tubaakada ayaa sidoo kale caawin karta: 400 g oo tubaako ah iyo 40 g oo saabuun ah oo saabuun ah ku shub 9 litir oo biyo ah oo ka bixi maalin.
Wax ku ool ah ayaa weli noqon kara yaanyo yaanyo, yaanyo iyo basal iyo faleebo casaan ah oo casaan leh.
Qalabka kiimikada, waxaad isticmaali kartaa daawooyinka noocan ah: "Kinmiks", "Decis", "Iskra", "Intavir", "Fitoverm" ama "Aktara". Si aad u diyaariso xal sida raacitaanka barashada. Wax-soo-saarka ugu fiican ayaa la sameeyaa fiidkii inta lagu jiro cimilada qalalan.
Cudurada caadiga ah ee qaboobaha ayaa ah xagta oo budada ah, xoqan, cytosporosis, xoqan, kansarka bakteeriyada, caaryada cawl.
Sidaas awgeed waxaad la kulantay noocyo kala duwan oo cajiib ah Kerio, sawir iyo sawir, iyo sidoo kale akhri sida loo abuuro iyo daryeelka. Waxaan rajeyneynaa, ka dib dhammaan talooyinka, waxaad awoodi doontaa inaad koraan warshadkan quruxda badan oo kugu farxi doona ubax muddo dheer.